१५ गतेदेखि होटल पर्यटन खुल्दै, कस्तो छ स्वास्थ्य सुरक्षा ? | AbcSanchar.com
१५ गतेदेखि होटल पर्यटन खुल्दै, कस्तो छ स्वास्थ्य सुरक्षा ?
प्रकशित मिति : १३ श्रावण २०७७, मंगलवार १७:०७
काठमाडौं नेपालमा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । अहिलेसम्म १८ हजारभन्दा बढी व्यक्ति सङ्क्रमित भएका छन् भने पाँच हजारभन्दा बढी अझै पनि उपचाररत छन् । तेह्र हजारभन्दा बढी व्यक्ति निको भएर घर फर्किसकेका छन् । तर सङ्क्रमणको जोखिमका कारण गत चैत ११ देखि शुरु गरिएको बन्दाबन्दी भने विस्तारै खुल्दैछ । लामो समयपछि सरकारले यही साउन ५ गतेबाट लामो दुरीका यातायात, हवाईसेवा र शिक्षण संस्था बाहेकका क्षेत्रमा बन्दाबन्दी हटाएको छ । काठमाडौँलाई बन्दाबन्दीबाट खुला गरी आर्थिक क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउने रणनीति सरकारले लिएको छ ।
उहाँका अनुसार पशुपति क्षेत्रमा यसको काम अन्तिम चरणमा पुगेका छ । त्यहाँ धेरै मानिस आउनसक्ने भएकाले क्यामरा स्क्यानिङ गरेर त्यसबाट ज्वरो नाप्न मिल्ने स्वचालित प्रविधिको प्रयोग हुँदैछ । साधारण पूजा, विशेष पूजा र जात्राका लागि खोल्ने योजना छ । रासस